Dumarka Qaar oo La ogaaday in Ay Jecelyihiin in Loo Qanqanino Kintirka Iyo Weliba…… | shumis.net
Home » galmada » Dumarka Qaar oo La ogaaday in Ay Jecelyihiin in Loo Qanqanino Kintirka Iyo Weliba……
Dumarka Qaar oo La ogaaday in Ay Jecelyihiin in Loo Qanqanino Kintirka Iyo Weliba……
Haweenka qaarkood waxa ay jecel yihiin in kintirka laga kiciyo kor iyo hoos….waliba qaybta qaarkoodna dhanka midig ee kintirka waana meesha uga kacsiga badan .
Daraasda ayaa lagu sheegay in dumarka dareenkeeda hoose aad u kordho xiliyadaasi, waxay noqodaan kuwaaan xitaa aan ka xishoonin galmada waxayna la soo baxaysaa qibrado badan iyo farsamooyin aan caadi eheen.
Sidoo kale waxaa daraasdaan lagu sheegy in dumarka marka ay joogaan xiliyadaasi aysan ka helin galmada degdeg ah, waxay jecel yihiin in loo raaxeeyo ku dhwaad 25 daqiiqo markaasi kaddib waxay u baahanyihiin galmo culus .
Dhinaca kale daraasadeen ayaa sameyn weyn ku yaalatay dumarka Soomaalida ah oo inta badan loo guday qaabka lagu magcaabo Fircooniga,iyadoo laga jaray xubinta kintirka oo lagu sheegay in raaxo waali ah laga helo.
Dumarka loo gudo qaabka firconiga ah ayaa la sheegay in macaansiga raaxada iyo galmada ay u bilaabato marka ay gaaran 30 ka sano ama ay dhalmo gooyaa,waxayna dareemaan rabitaanka galmada waayo da’dan marka ay gaaraan farjiga murqihiisa ayay ka dareemaan galmada .
Ugu dambeytii daarasada ayaa raga ugu baaqaday in dumarka ay si wanagsan ugu raaxeeyaan xiliga ay gaaraan 30-45 Sano ayna ka haqabtiraan baahida galmada.
Title: Dumarka Qaar oo La ogaaday in Ay Jecelyihiin in Loo Qanqanino Kintirka Iyo Weliba……
Posted by Unknown, Published at December 22, 2016 and have 0 comments
sheeko wasmo somali ah qaabka galmada xalaasha
Raga isku mid mahan wayo alle ayaa waxaa uu u kala dhalshay dareen gooni ah waayo sidaas ayaa ah mid kaliya ee lagu ogaan karo in aysan dad...